कवितारामका दुई कथासंग्रहः एक पर्यावलोकन
HomSuvedi — Thu, 11/23/2017 - 04:21
निकै घनिष्टता थियो मेरो तपाईंसँग । आज म मेरो पुरानो साामग्रीका साथ तपाईंको हार्दिक स्मरण गर्दछु । यहाँको स्मृतिमा यही पुरानो पुष्प मझेरीमा चढाउँदै मझेरीका समग्र परिवारहरुको तर्फबाट समेत आत्माको चिर शान्तिका लागि प्रार्थना गर्दछु ।
होम सुवेदी )
प्रसङ्गपूर्वको केही विषय
समीक्षणकर्मका लागि मेराअघि २०३६ र २०३८ सालमा प्रकाशनमा आएका दुई वटा कथाका पुस्तक रहेका छन् । पहिलो संग्रह चाहिं सारसंग्रह प्रकाशन काठमाडौंबाट छापिएको हो । अर्को कथासंग्रहको प्रकाशन भने साझा प्रकाशनबाट भएको छ । पहिलो कथाको पुस्तकको नाम ‘कालो कथा’ हो र दोस्रोको नाम चाहिं ‘प्रलाप’ हो ।
गए राति सपनीमा
इ सानै उमेर् देखि मन् हर्न लागे
न मन रह्यो, न साथी ?
को देखछ घाउ
बेहुला आए बेहुली लिन
मिठो छुरा धस्यो
सरकार पो किन चाहियो
साँचै मर्दा लाने हजुर
साथी बन्छ कसरी?
गजल (सुर बिना गुन्जिएको गीत)
मलाई आफ्नो साथी बनाउन
बगरको ढुङा म !
तीन मुक्तक (थकित पीडित मन)
एउटा इतिहासको विघटन
दरिद्र मानसिकताको उपज
सलाम छ मेरो
जो शायद हैन मेरो
चिराग तो जलाओ, बडा अन्धेरा है
मन्दिरमा धुप बत्ती डढाई के हुन्छ र ?
इतिहास बोकेको जीवनयात्रा